My Prediction | Layma's World
« အမှတ်တရ (၂)… Notice »
hninhnin, on October 22, 2007 at 1:29 pm said:
မမလေးရယ်… ဗေဒင်ဟောခ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။ ၀န်ခံပါတယ်။ တော်သေးရဲ့ သိုးလေးပေါ်မှာ မမလေး ခံသွားလို့။ မဟုတ်ရင် နံပါတ် တစ် ဖြစ်နေဦးမယ်။
သန့်ဇော်မင်း, on October 22, 2007 at 1:35 pm said:
မမလေးရေ.. တော်တယ်။ ဟုတ်ပ… ကျွန်တော် အပြင်လောကမှာ စကားနည်းပါတယ်။ ဘလော့ဂါတွေ အစည်းအဝေးလူဖူးတဲ့ သူတွေကို မေးကြည့်ပါ။ အဲဒါပေမယ့် ကျွန်တော်စကားများတဲ့ အချိန်ရှိပါတယ်။ ( တလွဲမတွေးနဲ့နော်.. 😛 ) စာသင်တဲ့ အချိန်ပါ.. စာသင်ချိန် ၂ နာရီလောက်ကတော့ မနားတမ်းကို ပြောတာ။ မယုံ.. လာနားထောင်ကြည့်။
ပီကေ, on October 22, 2007 at 4:29 pm said:
ပီကေလည်းပါမယ်ဟေ့။ တို့လည်း စကားတအားနည်းတယ်။ မပြောရင် ဘာသံမှ မကြားရဘူး။ မယုံရင် မျက်လုံးနဲ့ မယ်လိုဒီမောင်ကို မေးကြည့်။ သူတို့က ငယ်သယ်ရင်းကြီးတွေ။
သဉ္ဇာ, on October 22, 2007 at 5:58 pm said:
အစ်မရေ.. စာရင်းပေးမလို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ အစ်မ ဗေဒင် ဘယ်လောက်မှန်လဲလို့ သိချင်လို့။ သဉ္ဖာ့ကို ဟောကြည့်။ အပြင်မှာ ဘယ်လို လို့ ထင်လဲ
မျှားပြာ, on October 22, 2007 at 8:47 pm said:
ပထဆုံးတစ်ယောက်ကို ဟောထားတာနဲ့တင် မှန်နေပြီ
စကားနည်းပြီး လက်ပဲ သွက်တာ ဟတ် ဟတ် ဟတ်
naing, on October 22, 2007 at 10:26 pm said:
မှန် လိုက်တာ ။ ပုံလေးက မှန်လေး ခဏငှားပါ ၊ မှန်ကြည့်ပြီး ဗေဒင်ဟောတာထင်တယ်။
ah nai, on October 23, 2007 at 5:07 am said:
ကျွန်တော်လည်း စကားအရမ်းနည်းတာ.(မမှန်လည်းမှန်တယ်လို့ ပဲ မှတ်ထားလိုက် :P) .ဟေ..ဟေး.. စကားတာနည်းတာ.. စားစရာတော့ လာထားခဲ့… ယူစားပီသားပဲ.. 😀
Yan, on October 23, 2007 at 10:56 am said:
enics, on October 23, 2007 at 10:59 am said:
အမရေ sparrow ကိုလည်းချန်မထားနဲ့လေ….
မှန်ရင် ‘တင်တင်အေးမုန့်ဟင်းခါးနဲ့ တရုတ်တန်းကဖတ်တီးမ
ကောက်ညှင်းထုပ် ‘ ၀ယ်ကျွေးမယ်…..
မှားလို့ကတော့ ‘ဒေါ်နန်းပန်းဆိုင်ကတို့ဟူးနွေး ‘
ဂျယ်ရီ, on October 23, 2007 at 11:43 am said:
စကားနည်းတဲ့ အထဲ ဂျယ်ရီတို့လည်း ပါသပေါ့ကွယ် ။ တစ်နေ့လုံးနေမှ တစ်ခွန်းလောက်ပဲ ပြောဖြစ်တာကလား !!! ဒါပေမဲ့ အဲဒီတစ်ခွန်းမှာ စကားလုံးရေ ၅ သောင်းလောက်တော့ ပါတာပေါ့ ကွယ် ။ ဟွင်း ဟွင်း ….. အေးတိအေးစက်တော့ ဟုတ်ပါဘူး ။ နွေးနွးထွေးထွေးပါဗျ ။
Rapster, on October 23, 2007 at 6:30 pm said:
UltraSurf သုံးလေ.. ဟိုအပေါက်ကနေတိုးစရမလိုတော့ဘူး
Bayint Naung, on October 23, 2007 at 10:08 pm said:
ဗေဒင်ဟောတဲ့ အခါမှာကော ဘယ်လိုဟောလဲ လေးမ။
Layma, on October 25, 2007 at 3:02 pm said:
နှင်းနှင်း…ဟောကခ ပိုစ့် ၁၀၀ ။
ကိုသန့်… ညာတာပါတေးနဲ့တပည့်ခံခိုင်းနေတာလား..။
ကိုပီကေ … မယုံတယုံနဲ့ယုံပေးလိုက်ပါတယ်…။
သဉ္ဇာလေးက စကားပြောရင် ကျွန်တော်လို့ပြောမယ်..ကားတား ကားတား လျှောက်မယ်… မိန်းမသိပ်မဆန်ဘူး…။
ကိုမျှားပြာ…လက်ကတော့ သွက်သလားမမေးနဲ့ …။
အနိုင်…. အစားမနည်းတာတော့ မကောင်းဘူးနော်…။
ကိုရန်က…နည်းမှာပါ..( ကပ်စေး )
ဂျယ်ရီ…. သိပါတယ်…သိပါတယ်…နွေး၂ထွေး၂ဆိုတာ (အနွေးထည် ၀တ်ထားလို့နေမှာ)
ကိုဘုရင့်နောင် … မှန်ကြည့်ပြီးဟောတာလေ…ပုံလေးတောင်ပြထားသေးတယ်…။
Khunmyahlaing, on October 25, 2007 at 4:37 pm said:
Predict me too 😛
သဉ္ဇာ, on October 27, 2007 at 5:03 am said:
အင်း.. တိနေတယ်နော်.. ဒီကုန်ကြမ်းတွေ ဘယ်က ရတယ်ဆိုတာ.. ဘလော့ဂ်စပေါ့ ဗေဒင်ပေါ့လေ။
ညလေး, on October 27, 2007 at 12:49 pm said:
လေးမရေ အိမ်သစ်တက်ပွဲကို နောက်မှပဲ သိရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညလေးရော စကားနည်းမနည်း ဟောပေးပါဦး။ အင်း မလိုအပ်ရင် စကားအပိုမပြောပဲ လိုအပ်လာရင်တော့ ရေပက်တောင် မ၀င်ဘူးဟ။ 😛
layma, on October 27, 2007 at 4:21 pm said:
မလှိုင်..နဲ့မမညလေး ရေ….ဟောထားတယ်နော်..မှန်ရင် မုန့် ကျွေး..။ မှားရင် အအေးတိုက်…။